» अपडेट : संयोजक ज्यू ! सिम्भञ्ज्याङ बजार अनुगमन कहिले हुन्छ ?
अपडेट : संयोजक ज्यू ! सिम्भञ्ज्याङ बजार अनुगमन कहिले हुन्छ ?
२०७५ माघ १३,आईतवार १४:२३
मकवानपुर १३ माघ । मकवानपुरको पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा परिचित सिम्भञ्ज्याङमा हिमपात शुरु भएपछि होटेल व्यवसायीहरुले सर्वसाधारणलाई चर्को मूल्य अशुल्ने गरेको खुलेको छ । होटेल व्यवसायीहरुले मूल्यसुचिबिनानै खानाको दोब्बर मुल्य अशुल्ने गरेका छन् । शनिवार मकवानपुरका संचारकर्मीहरुको टोलीलाई इच्छापूर्ण होटेल एण्ड लजले खानाको दोब्बर मुल्य लिएको छ । त्यसोत होटेलले बेच्ने खाना पनि गुणस्तरहिन रहेको गुनासो बढीरहेको छ ।
सिम्भञ्ज्याङमा बर्षेनी हिमपातको समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको चहलपहल बढ्ने गर्दछ । पर्यटकिय रुपमा निकैनै परिचित स्थान सिम्भञ्ज्याङ, त्यहाँका होटेल व्यवसायीको कमाउधन्दाका कारण बद्नाम हुँदैगएको छ । शनिवार संंचारकर्मीहरुको टोली र नयाँ पाईला नामक सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने टोलीनै ठगिएपछि होटेल व्यवसायीको विषयमा धेरैले गुनासो गर्न थालेका छन् । यस विषयमा तु खबरले ईच्छापूर्ण होटेल एण्ड लजका संचालकलाई फोनसम्पर्क गरेर जिज्ञासा राख्दा उनले आफ्नो होटेलले त्यस्तो काम नगरेको बताए ।
यदि त्यस्तो गरेको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको होटेलका संचालक बताउँछन् । उनले तु खबरलाई नाम बताउन भने चाहेनन् । मुल्यसूचि नदेखाउने अनि सर्वसाधारणलाई चर्को शुल्क लिने होटेल व्यवसायी सिम्भञ्ज्याङमा धेरै छन् । मुल्यसूचि किन होटेल व्यवसायीले नराखेको भन्ने प्रश्न उद्योग वाणिज्य संघ थाहानगरपालिकाका अध्यध कविराज खत्रीलाई गर्दा उनले आफुले पटक पटक मुल्यसूचि राख्न होटेल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको बताए । तर कसैले नटेरेको उनी बताउँछन् ।
के गर्दैछन् उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक गोपाली ?
थाहा नगरपालिकाका उपमेयर खड्ग गोपाली उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक छन् । तर अधिकाँश समय ठेक्कापट्टामा व्यस्त रहने गोपालीलाई न त उपभोक्ता ठगिएकोबारे जानकारी छ न त अनुगमन गर्ने फुर्सदनै । तु खबरको जिज्ञासामा गोपालीले तत्काल बजार अनुगमन गर्न पहल गर्ने बताए ।